Kooxda Real Madrid oo kordhisay qiimaha ay ku doonayso Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah – Gool FM
Kooxda Real Madrid oo kordhisay qiimaha ay ku doonayso Weeraryahanka Liverpool ee Mohamed Salah
Haaruun October 8, 2019
(Madrid) 08 Okt 2019. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay doonayso inay kordhiso qiimaha ay ku doonayso Mohamed Salah waxaana ay diyaar u tahay inay ku qarash-gareyso 152 milyan oo gini si ay u helaan adeegga Weeraryahanka Naadiga Liverpool.
Tan iyo markii uu ku soo biiray Kooxda Liverpool sanadkii 2016-kii, Salah ayaa u soo muuqday mid ka mid ah weeraryahannada ugu awoodda badan kubadda cagta adduunka, isagoo dhaliyay 77 gool 116 kulan uu ka soo ciyaaray macallin Jurgen Klopp.
Si kastaba ha ahaatee, warar isku mid ah oo soo baxaya ayaa waxa ay soo jeedinayaan in Los Blancos ay eegeyso inay Salah ka dhigto doorashadeeda koowaad xagaaga soo socda marka loo eego Kylian Mbappe.
Wararka laga helayo gudaha dalka Spain ayaa waxa ay sheegayaan in Real Madrid ay diyaar u tahay inay kordhiso qiimaha soo jeedintoodii hore ee ahaa 134 milyan oo gini oo ay gaarsiiyaan 152 milyan oo gini oo loogu talagalay soo xero gelinta xiddigan reer Masar, taasoo ka dhigeysa isaga inuu noqdo saxiix rikoorka kooxda ah.
Tababare Zinedine Zidane ayay ka go’an tahay inuu horumariyo xulashadiisa dhanka midig ee weerarka, iyadoo mararka qaar Gareth Bale uu buuxiyo doorkaas.
Yeelkeede, warbixinta ayaa sheegaysa in Salah, xiriirka kala dhexeeya Sergio Ramos, uu door-bidi lahaa inuu u dhaqaaqo kooxda Barcelona sanadka soo socda, maadaama uu xiriir wanaagsan la lahayn kabtanka Real Madrid.